Mogadishu Journal » 2018 » April » 9
Jawaari oo si rasmi ah u cadeeyay in uu xilka iska casilay
Mjournal :-Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey inuu go’aansaday inuu xilka iska casilo. “Waxaan idin xaqiijinayaa inaan iska casilay xilka Afhayeenka Baarlamanka, waxaan u turay aayaha dalka iyo inuusan imaan khalalaase...
Wararkii ugu dambeeyay kulamo ka socda Madaxtooyada kadib is casilaadii Jawaari
Mjournal :-Wararka aan ka heleyno Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in xiligan kulamo kala duwan oo xasaasi ah ka socdaan Vilal Soomaaliya, kulamadan ayaana xoogooda looga hadlayaa is casilaada Jawaari. Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka socdaan...
Puntland oo duq magaalo u magacawday Magaalo ay maamusho Somaliland (Akhriso)
Mjournal :-Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland Eng Cabdixakiim Cabdulaahi Cumar ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa waxa uu Duqa magaalada Laascaanood ugu magacaabay Cabdiqani Makhtal Maxamed Garaad. Wareegtada kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne kuxigeenka maamulka Puntland...
Mjournal :-Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa markale Xukun dil ah ku riday Ex, G/sare Cabdinaasir Xoosh Maxammed oo horay dil ugu soo xukuntay Maxkamadda Darajada 1aad Ee Ciidamada Qalabka Sida. Ex, G/sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed ayaa 18-kii bishii Janaayo ee...
Mjournal :-Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa shaaciyay in Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu is casilay, isla markaana mooshinkii ka yaallay la laalay. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku shaaciyay Mr Xoosh oo ka mid ahaa...
Mohamed Osman Jawari, Speaker of the Somalia’s parliament lower house also known as house of the people resigned, his first deputy announces. After looming political crisis in Mogadishu Jawari had discussions with the President Mohamed Abdullahi farmajo to reach political...
Mjournal :-Waxaa dib loo furay guud ahaan wadooyinka Magaalada Muqdisho, kadib markii uu is casilay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari). Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka ayaa xalay saq dhexe xiray wadooyinka Magaalada Muqdisho, maadaama la filayay...
Mjournal :-Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Golaha shacabka Soomaaliya Cabdi wali Shiikh Ibraahim Muudeey ayaa goor-dhaw sheegay in uu iscasilay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari. Warqad la sheegay in uu soo qoray Guddoomiye Jawaari ayaa laga...
Mjournal :-Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho, maadaama maanta lagu balansan yahay kulanka Baarlamaanka oo xiisad siyaasadeed wata. Kulanka Baarlamaanka ayaa saakay lagu balansan yahay...
Kulanka baarlamaanka oo dib u dhac ku yimid
Mjournal :-Wararka hadda soo dhacay ayaa sheegaya in uu baaqday kulankii maanta xarunta Golaha Shacabka ay ku yeelan lahaayeen Xildhibaanada Baarlamaanka. Guddoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka C/wali Ibraahim Muudey ayaa xildhibaanada ku wargeliyay inuu baaqday...